Nhoroondo yeKambani-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Pombi Yemvura Pombi
Water Pump Seal Kubereka
Takumi. Chiratidzo cheMhando & Kuvimbika
Takumi Japan iboka remotokari rine zvikamu zviviri zvebhizinesi: echinyakare auto zvikamu chikamu & nyowani simba magetsi mota chikamu.
Takumi Japan auto zvikamu bhizinesi chikamu chakasarudzika mukugadzira, kugadzira uye kushambadzira kweIgntion system zvikamu, Filtration system zvikamu & Mahybriti Mabhatiri pasirese. Kutora mukana weanotungamira matekinoroji, zvigadzirwa kubva kuTakumi Japan zvave kuwana mukurumbira wakanaka kwazvo uye kuwana kugutsikana kwevatengi.
Takumi Japan yakagadzira timu yehunyanzvi kumisika yepasi rose uye yaigara ichitora chikamu kumitambo mikuru yepasi rese kubatsira vatengi vedu kuti vave nemukurumbira mumisika yemuno.
Takumi Japan inovhara inotevera mhuri dzezvigadzirwa:
Igntion system zvikamu: spark plugs, kuvesa mavhiri, igntion waya maseti, kuvesa controllers
Dzomoto plugs: Mhangura diki & Iridium platinum yakashongedzwa yemotokari, midhudhudhu, gadheni machini, magasi jenareta & zvimwe zvakakosha zvinoshandiswa.
Kubatira maoils: Coil-Pedyo-Plug (CNP), Coil-On-Plug (COP), Stick Coil yemota & gasi jenareta.
Kuchenesa tambo: Yakaderera kuramba tambo ine silicone rabha kana teflon yemotokari & gasi jenareta.
Magadzirirwo evanodzora: Kuchenesa kudzora nguva yegasi jenareta ane 4,6,8,12,16,20 macirita.
Filtration system zvikamu: mafirita emafuta, mafirita emhepo emhepo, mafirita emafuta uye mafirita emagetsi.
Mafirita emafuta: ekusefa kweinjini oiri, hydralical mafuta & ese marudzi emotokari nemachina.
Mafirita emafuta: kumarudzi ese peturu uye kudzinga mafuta.
Mhepo mafirita: emarudzi ese emotokari nemachina.
Makabhati mafirita: emhando dzese dzemotokari, machina uye yekuchenesa mweya.
Hybrid mabhatiri: akazara maficha anosanganisira asi asina kuganhurirwa kuToyota camry prius lexus, Honda accrod nzwisiso yemagariro kukodzera & Ford fusion. Yakavimbiswa mhando newaranti uye OE kuita.
Takumi Japan nyowani magetsi emagetsi mota bhizinesi chikamu chine zvikamu zviviri: Yakaderera Speed ​​Mota Mota (LSEV) Chikamu & Yekumhanyisa Magetsi Mota Mota.
TAKUMI Auto Parts Co, Ltd. Ipa online rubatsiro rwekubatsira iwe kupindura mibvunzo yese nezve zvemagetsi zvemagetsi, kupa izvo zvazvino kuitika, nzira dzekutenga, ruzivo rwekushandisa, mushure mekutengesa sevhisi uye mamwe masevhisi.
[email inodzivirirwa] Takumi Auto Zvikamu Co., Ltd